1. Ny pancakes dia tena mora ampiasaina. Fangaro vitsivitsy ihany Ary tsy mila fitaovana manokana toa izany Ny mpikapoka na ny lafaoro koa Ny ilainao dia lapoaly enamel iray fotsiny dia ampy. Androany isika dia manana fomba fanaovana pancakes. Mora samirery mandao. Azonao atao ny manandrana izany any an-trano.
2. Akora ilaina amin'ny pancakes 1. lafarinina varimbazaha 2. siramamy (atoro anao toy ny siramamy volontsôkôla) 3. vovo-mofo 4. dibera na menaka 5. vovoka lavanila 6. Atody 7. Ronono vaovao 8. Tofotra ilaina toy ny sôkôla, jamam-boankazo, tantely, cookies, voankazo vaovao sns.
3. Afangaro miaraka ireo lafin-javatra fototra, ao anatin'izany ny lafarinina varimbazaha, sotro 2-3, atody 1, ronono vaovao, sotro 2-3, siramamy, arakaraka ny hamamiana irina. Avelao ny olona hifangaro tsara. Raha tsy manana kapoka ianao dia tsara izany. Azo ampiasaina ho zana-kazo fa tsy izany
4. Manaraka, ampio ny sasany amin'ireto akora ireto, raha misy: sachet ny vovoka lavanila ho an'ny tsiro sy hanitra kely, ary vovo-mofo kely fanampiny, antsasaky ny eran'ny sotrokely iray, ampy hanamaivana ny pancake fotsiny. Mitandrema ihany anefa ary aza asiana vovon-tsakafo be loatra, satria izany dia hameno ny pancake loatra.
5. Alefaso ny lasantsy, apetaho amin'ny lapoaly ambony ny lapoaly. Manampia menaka na dibera 1 sotrokely eo ho eo ary aparitaho amin'ny ladle ny dibera mandra-pahatongan'ny vilany rehetra.
6. Rehefa atsonika ny dibera dia ampiasao ladle na ladle iray handrotsahana ny adina pancake izay efa nomaninay ary araraka eo ambonin'ilay lapoely amin'ny endrika boribory raha vao mahazo ampahany 3-4 avy amin'ny fangaro amin'ilay lafarinina efa nomanina teo aloha izy, tokony hivoaka tokony ho 6. -8 singa, vonona hanompo 2 eo ho eo
7. Rehefa masaka tsara ny ilany dia azonao ahodina ny ilany. Tandremo sao mampiasa afo mahery. Ary andramo apetraka ny vilany Ny afo mandefa hafanana amin'ny laoniny. Ny pancakes dia ho masaka miaraka amin'izay.
8. Atsofohy amin'ny lovia iray ary manahaingo amin'izay sombin-javatra tadiavinao, na sôkôla, sakam-boankazo, tantely, cookies, voankazo vaovao sns. Ilay kinova nasiana hena dia matsiro ihany koa!
9. Ahoana ny fahasalamana? Ny fomba fanaovana pancakes dia mora kokoa noho ny nandrasana, sa tsy izany? Ankehitriny, tsy mila fampihavanana ny cafe ianao satria Afaka manao izany ny tenako. Azonao atao ny manisy topping betsaka araka izay tadiavinao. Andramo, dia ho voasarika ianao. Mety ho somary miadana ny fanombohana, fa raha manandrana mampihatra azy matetika kokoa ianao Azo antoka fa hanjary hahay kokoa Mandra-pahatongan'ny andro iray dia ho fantatrao ny fomba fahandro tianao izay tianao Inona avy ireo fangaro ary ohatrinona no apetraka Ahenao araka izay itiavanao azy ilay mamy. Ny tombony azo amin'ny pancakes dia tsy mora atao fotsiny. Mbola mankafy tsiro vaovao Miaraka amin'ny topping koa Ny akondro sy Nutella no tianay indrindra, koa inona no andramanao ary inona no tianao indrindra hihinana pancakes amin'ny ankamaroanao?